Mucaaradka TPLF oo ku dhowaaday Addis Ababa iyo Mareykanka oo digniin culus soo saaray [Wararkii Ugu dambeeyay].
Thursday November 18, 2021 - 07:10:19
Sida ay sheegayaan wararkii ugu dambeeyay ee laga helayo wadanka Itoobiya kooxaha mucaaradka ayaa horumarro ballaaran oo dhanka dagaalka ah ka sameynaya bartamaha iyo koonfurta wadankaasi.
Kooxda TPLF iyo xulufadeeda Oromada ayaa kaabiga ku haya magaalada istiraatiijiga ah ee Shewa Robit, sida ay baahisay shabakada Bloomberg dagaallo culus kadib ayay mucaaradka usuuragashay in ay ku dhowaadaan magaaladan oo aan sidaas uga fogeyn magaalada Addis Ababa.
Wariyaasha soo tabiya dagaalka Itoobiya ayaa xaqiijiyay in markii ugu horraysay ay Tigreegu gomodahooda dhigeen gobolka Shewa oo ay ku xooganyihiin taageerayaasha Abiy Axmed.
Dadka Amxaarada ah ee deeggan magaalada Shewa Robit ayaa bilaabay Bankiyada ay kala baxaan lacagta kataal sababa laxiriira cabsi ay ka qabaan in magaaladan ay ku dhacdo gacanta mucaaradka.
Dhinaca kale dowladda Mareykanka ayaa markii ugu dambeeyay ku siisay muwaadiniinteeda in sida ugu dhaqsiyaha badan ay uga baxaan dalka Itoobiya.
Antony Blinken oo ah wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka ayaa isagoo warbaahinta kula hadlayay magaalada Nairobi ee dalka Kenya amar kusiiyay muwaadiniinta American-ka ah in ay isaga baxaan Itoobiya.
Dardarta dagaalka Itoobiya ayaa imaanaysa xilli ay xukuumadda Addis Ababa diyaarado Drone ah kasoo iibsatay dalka Turkiga.
Dibadbax ay dhigan lahaayeen Mucaaradka Farmaajo oo baaqday.
Dowladda Mareykanka oo hanjabaad ujeedisay wax ay ugu yeertay Qaswadayasha Soomaliya.
Mareykanka oo Cunaqabateymo ugu hanjabay madaxda DF-ka haddii uu dib udhac ku yimaad doorashooyinka.
Qarax ay ku le'deen maleeshiyaatka uu Mareykanku soo tababaray oo Ka Dhacay duleedka Dhuusamareeb